Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/ohabolana/antitra
Proverbe 360 Ampemby : antitra vao mitsiky vazana . [Veyrières 1913 #1799, Cousins 1871 #150]
Proverbe 382 Anantsinahy lavitra olona : ho antitra eny am--pijoroana , ka homba ny lamban' ny mpandalo . [Veyrières 1913 #1800]
Proverbe 559 Ankizy toa misy ambiny, lehibe toa tsy ampy kely, ohatra ny antitra nahazo bodokely . [Rinara 1974 #285]
Proverbe 582 Antidahin-dambo , antitra am-pandrembezana . [Samson 1965 #A85]
Proverbe 586 Antitra fahanan-kanina , ka na atao voky an-tenda aza mbola manjoko ihany. [Rinara 1974 #293]
Proverbe 587 Antitra manara am--pandriana : mivoady ny masoandro hiseho . [Veyrières 1913 #1803, Cousins 1871 #247]
Proverbe 588 Antitra natonton' olona , ka zara raha nahatana ny ainy . [Rinara 1974 #295]
Proverbe 765 Avelao ho antitry ny ditrany izy. [Veyrières 1913 #6342]
Proverbe 1069 Aza manao lahy antitra mahazo lamokan' atody akoho , ka tsy mitodi-jafy intsony. [Houlder 1895 #1958]
Proverbe 1172 Aza manao toy ny voavahy : tanora , manani-kazo ; antitra , vao mikorintsana. [Veyrières 1913 #1807, Cousins 1871 #528]
Proverbe 1646 Be ny tanora natao tsy hivaona fa nony antitra niady lohalika . [Rinara 1974 #881]
Proverbe 1651 Be resaka hoatry ny vavy antitra nisaoram-bady , ka izay hita rehetra dia anokonan-dresaka avokoa . [Veyrières 1913 #1365]
Proverbe 1807 Dihin' antitra ka ny tana-milantsika an-daniny, ny ranomaso koa an-daniny ihany. [Rinara 1974]
Proverbe 1822 Ditran' antitra . [Veyrières 1913 #6399]
Proverbe 2116 Fisoitra afom- bavy antitra : hita alika , kapohina ; mandroatra ny vary , haroina aminy indray. [Veyrières 1913 #1873]
Proverbe 2667 Izay mahia zokin' antitra . [Veyrières 1913 #1818, Rinara 1974 #1498]
Proverbe 2680 Izay mandroboka indroa manana antitra . [Veyrières 1913 #5268]
Proverbe 2797 Kalon' antitra ka tany no farany . [Rajemisa 1985]
Proverbe 2849 Katsaka lavi-tanàna : raha antitra lanin' ny goaika . [Rinara 1974 #1606, Cousins 1871 #1235, Veyrières 1913]
Proverbe 2885 Ketsa va aho ka ho antitra iray taona? [Houlder 1895 #820, Cousins 1871 #1260]
Proverbe 2945 Korodona an’ i Boso ; antitra mahefa . [Samson 1965 #K27]
Proverbe 2957 Lahiantitra kendam-bodiakoho : mahazo fanjakana vao mivadi-boamaso , tonga ny valim-pitia vao voan' ny totohondry any an-katony . [Rinara 1974 #1668]
Proverbe 2958 Lahy antitra kendan' ovy , ka tsy natolaky ny sasany, fa maty nasesiky ny tendany . [Veyrières 1913 #1819]
Proverbe 2959 Lahiantitra lozabe ka tsy mahatsiaro ny soa nataon-kavana . [Rinara 1974 #1670]
Proverbe 2960 Lahy antitra mampirafy : homan-droa trano vao ranga sofina. [Cousins 1871 #1292, Rinara 1974]
Proverbe 2963 Lahiantitra manao lelik' asa ka mosaren' ny hafetseny . [Rinara 1974 #1674, Houlder 1895]
Proverbe 2967 Lahy antitra misondro-nifin' ny henan-kisoa : voky menaka vao tsy mahakombom-bava . [Veyrières 1913 #1824]
Proverbe 2969 Lahiantitr' Imamo : manao tsy mahomby , mihinana atosika ihany. [Rinara 1974 #1678]
Proverbe 3008 Lamban' antitra : tsy ilana izay rendrarendrany intsony, fa ny mafy ihany no tsara . [Veyrières 1913 #1829, Cousins 1871]
Proverbe 3116 Lava hadalana tahaka ny tana : kely midraiko ; lehibe midraiko . [Rinara 1974]
Proverbe 3369 Malaina hatry ny fahazaza, ka ory mandraka antitra . [Rinara 1974 #1926]
Proverbe 3486 Manampontsampona hoatry ny fatin' antitra . [Veyrières 1913 #1830]
Proverbe 3632 Manaraka am-bokony, tahaka ny vavy antitra miandry ombilahy . [Cousins 1871 #1564]
Proverbe 3661 Mandalo dia raikitra ohatra ny tsipolitra antitra . [Rajemisa 1985]
Proverbe 3746 Mandroroa ohatra ny mason' antitra . [Rinara 1974 #2082]
Proverbe 3813 Manjohizohy mihafihafy ohatra ny antitra mahantra . [Rinara 1974]
Proverbe 4081 Miara-monina amim-pahalainana fahazaza, ka mitafy voro-damba efa antitra . [Veyrières 1913 #1576]
Proverbe 4155 Mihalohalo toa voanjo am-bavan' antitra : tsy midina ho tohan' aina , tsy mitsipika ho an' ny akoho . [Rinara 1974]
Proverbe 4179 Mihena an-toerana karaha fen’ antitra . [Samson 1965 #M112]
Proverbe 4345 Mitabataba hoatry ny voanjo am-bavan' antitra . [Veyrières 1913 #1839]
Proverbe 4498 Mivarahontsana hoatry ny vavy antitra mandre faty lavitra . [Veyrières 1913 #1886]
Proverbe 4504 Mivezivezy , tahaka ny tsaramaso am--bavan’ antitra . [Cousins 1871 #1919]
Proverbe 4759 Nahoana no tony tanora tsy miala nenina , ka efa tsipolotra antitra vao tia sangy? [Houlder 1895 #1115]
Proverbe 4968 Ny antitra antitra ihany. [Veyrières 1913 #1844]
Proverbe 4969 Ny antitra hazo amoron-tevana , ny tanora tany mandondona , ka tsy hita izay ho lasa aloha. [Veyrières 1913 #2892]
Proverbe 5014 Ny ditra maha-kely antitra . [Veyrières 1913 #6373, Cousins 1871]
Proverbe 5092 Nifin’ antitra : niainga tsy nitoravana . [Samson 1965 #N3]
Proverbe 5121 Ny fofony ihany no anjarany : ohatra ny vaviantitra nahandro hoditra . [Rinara 1974]
Proverbe 5280 Ny maharenin-janaka tsara anao no mavokely tsy miofo , ka hitiavan' ny vadinao anao ambaraka antitra . [Veyrières 1913 #1312]
Proverbe 5284 Ny mahia zokin' antitra , ary ny tsy manam-bato hatoraka zandrin- -jaza ! [Rinara 1974 #3093]
Proverbe 5810 Ombalahy antitra . [Veyrières 1913 #6766]
Proverbe 5962 Rafotsibe mampiady kalo , ka ny antitra antitra ihany. [Rinara 1974 #226, Rajemisa 1985]
Proverbe 6203 Raiki-pitia tamin’ antitra hianao, ka mbola tia ka nilaozany maty ; fa ny manina irery no mangozohozo . [Veyrières 1913 #1781, Cousins 1871 #2732]
Proverbe 6213 Rakitr' antitra . [Veyrières 1913 #2324]
Proverbe 6299 Ratsy miafara, hoatry ny lahy antitra maka mosavy . [Veyrières 1913]
Proverbe 6300 Ratsy miafara toy ny fanoto : antitra vao kely anarana . [Veyrières 1913 #1852, Cousins 1871 #2768]
Proverbe 6336 Resak' antitra . [Veyrières 1913 #1853]
Proverbe 6406 Sahala amin' ny voatavo : antitra vao avadiky ny sasany. [Veyrières 1913 #1854]
Proverbe 6562 Sifotra antitra aho, ka tsy maha-reny vorona anao. [Houlder 1895 #1945]
Proverbe 6563 Sifotra antitra , ka tsy mahangeza renivorona . [Cousins 1871 #2886]
Proverbe 6564 Sifotra antitra ka tsy maha-renivorona . [Rinara 1974 #3873]
Proverbe 6674 Sondraran’ antitra : ianin’ ny taloha. [Samson 1965 #S56]
Proverbe 6721 Tahaka ny antitra mitomany : mainka loza miketrona manaratsy tena . [Houlder 1895 #1943]
Proverbe 6733 Tahaka ny tsipolitra : antitra vao tia sangy . [Rajemisa 1985]
Proverbe 6735 Tahaka ny valalanamboa : kely mitsipika , lehibe indrindra indrindra. [Rinara 1974 #3985]
Proverbe 6771 Taizan' antitra . [Veyrières 1913 #1860]
Proverbe 6808 Tanalahy manani-bero : antitra mijaiko , tanora mijaiko . [Veyrières 1913 #1711, Cousins 1871 #2993]
Proverbe 6870 Tanora kamo , ka nony antitra : sady lava ahoriana no manilika ny nenina . [Rinara 1974 #4054]
Proverbe 6877 Tanora ratsy fihary : antitra vao maka kitay . [Rajemisa 1985]
Proverbe 6879 Tanora tsara , fa antitra vao ratsy tahaka ny vero . [Rinara 1974 #4065]
Proverbe 6880 Tanora tsy kinga, ka antitra vao misanitika . [Veyrières 1913 #1863]
Proverbe 6883 Tanora tsy nanao na inona na inona, ka nony antitra : mipitrapitra. [Rinara 1974 #4068]
Proverbe 6909 Taolan' antitra , ka raha tapaka tsy mitohy intsony. [Rinara 1974 #4109]
Proverbe 6950 Tavin-kena am-bavan' antitra , ka lasa tsy antonon-tonony (mbola tsy re ny tsirony ). [Rinara 1974 #4115]
Proverbe 7121 Toy ny fanoto: antitra vao kely anarana. [Houlder 1895 #1942, Cousins 1871 #3191]
Proverbe 7191 Toy ny vero : tanora mandimandina , antitra main-dambana . [Rinara 1974 #4376]
Proverbe 7296 Torimasom- -bavi antitra ka vita am--pitsongoana anana ihany. [Rinara 1974 #273]
Proverbe 7324 Tovolahy manambady antitra , ka ny loa-bary no hianteherana ; fa atositosika , toa renibe ; avela ihany, anjara vadin' ny tena , ka izay voky matanjaka . [Veyrières 1913 #1335]
Proverbe 7328 Tovony manaja tanana , ka antitra vao be fitsiriritana . [Rinara 1974]
Proverbe 7439 Tsy avelan’ ny ela tsy ho antitra . [Houlder 1895 #1938, Cousins 1871 #3340]
Proverbe 7440 Tsy avelan' ny ela tsy ho antitra , ary ny andro iray aza maha-zokiny . [Rinara 1974 #4482]
Proverbe 7473 Tsy hita hatanorana ohatra ny tana : tanora midreho , antitra midreho . [Rinara 1974]
Proverbe 7736 Tsy misy hianterana ohatra ny bozaka : tanora sakafon' ny omby , nony antitra sakafon' ny fatana . [Rinara 1974]
Proverbe 7826 Tsy ny firongarongan' ny voalavo fa ny faha-kely antitry ny totozy . [Rinara 1974]
Proverbe 7858 Tsipolitra antitra ka manara-damba mandalo . [Rinara 1974 #4457]
Proverbe 7859 Tsipolitra ka antitra vao tia savitsavika (sangy ). [Rinara 1974 #4458]
Proverbe 7986 Valalanamboa : mandadilady mandrak' antitra . [Rinara 1974 #4839]
Proverbe 8121 Vavy antitra maka kitay : midina, manahy ny tsy hahazo; miakatra , manahy ny tsy hahazaka. [Cousins 1871 #3647]
Proverbe 8123 Vavy antitr' Imerina : andrasan-kanjoko vao mitera-dahy . [Veyrières 1913 #1941, Rinara 1974 #318, Cousins 1871 #3651]
Proverbe 8256 Voan’ angivy ny olombelona : tsy miarak’ antitra . [Samson 1965 #V71]
Proverbe 8275 Voatelina tsy satry , hoatry ny tavin-kena am-bavan' antitra . [Veyrières 1913 #1870]
Proverbe 8303 Volombavan' antitra : hariva vao menafify . [Rinara 1974 #5020]
Proverbe 8375 Za- drano toa amalona antitra . [Houlder 1895 #1948, Veyrières 1913 #6137, Rinara 1974 #5076]
Proverbe 8378 Zai-damban antitra , ka tsy mila izay rendrarendra , fa ny hahamafy azy ihany. [Rinara 1974 #5077]
Proverbe 8430 Zaza niara-nilalao izahay, antitra niara-nitanina andro , ka izay nalehany hitako avokoa . [Rinara 1974 #5095]